काठमाडौँ- स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा चर्को माग उठाउँदै आएका डा केसी अहिले आफ्नो १५ औँ पटकको अनशनको क्रममा रहेका छन्। यस पटकको अनसन भने केही फरक रुपमा रुपान्तरित हुँदै गएको देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको मर्मअनुसारको अध्यादेश आउनुपर्नेलगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै डा केसीले जुम्लाबाट आमरण अनशन शुरु गरेका थिए। आज सम्म आइपुग्दा डा केसी अनसन २३ औँ दिनमा समेत प्रवेश गरेको छ।
अनसनको समर्थन गर्दै भएको प्रदर्शन हिजो शनिबारको दिनमा केही हिंसात्मक बनेको थियो। त्यस क्रममा प्रदर्शनमा उत्रिएका देखि प्रहरी सम्म पनि घाइते हुन पुगेका थिए। अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो समर्थन जनाउँदै प्रदर्शनमा सहभागी भएको थियो। यस अनसनमा सत्ता बाहिर रहेका धेरै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो समर्थन रहेको जनाइरहेका छन्। राजनीतिक दलका नेता, विभिन्न पेशाकर्मी, चिकित्सक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याई डा केसीको जीवनरक्षा गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
आज पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै अनसनरत डा गोविन्द केसीका समर्थकले आइतबारदेखि बसन्तपुरमा सामूहिक अनशनको कार्यक्रम रहेको छ। आज डा केसी समर्थकले केसीको जीवनरक्षाका निम्ति विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरु रहेको छ। विशेष गरेर आज समर्थकहरु पनि बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म सामूहिक अनशन बस्ने कार्यक्रम रहेको छ।
उता सरकार पक्ष भने यी सम्पूर्ण माग लोकतान्त्रिक तरिकाबाट सम्बोधन गर्ने योजनमा रहेको बताइएको छ। सरकारले कुनै पनि मागहरु अनसनबाट पुरा गराउन खोज्नु गलत भएको बताउँदै आएको छ। संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक संशोधनमार्फत नै पारित गर्न सकिने सरकार बताइरहेको छ भने सत्ता पक्ष अहिले डा गोविन्द केसीका मागहरु वार्ता मार्फत पूरा गर्ने अडान सहित रहेको जस्तो देखिन्छ।
डा गोविन्द केसीको माग पूरा गराउने विषयमा सरकार पनि कठोरभै लोकतान्त्रिक रुपमा सम्बोधन गर्ने सोचमा रहेको जस्तो देखिन्छ। तर यता डा गोविन्द केसी पक्ष भने अनसन र प्रदर्शनबाटनै माग पूरा गराउने सोचमा रहेको देखिन्छ। यस अवस्था पूर्णरुपले अनसनतन्त्र र गणतन्त्र बीचको युद्ध रहेको जस्तै देखिन्छ। सत्तापक्ष अहिले माग लोकतान्त्रिक मान्यताका अनुरुप संसदबाट सम्बोधन हुनु पर्ने अडानमा कायम रहेको छ भने डा गोविन्द केसी पक्ष भने विधेयक फिर्ता हुनु पर्ने अडान देखि हदसम्म पनि विमुख नहुने देखिएको छ।
यस अनसनतन्त्र र गणतन्त्र बीचको युद्धमा साथ दिनको लागि अस्पतालको उपचार प्रभावित गर्ने चिकित्सकका कारण भने सोझा-साझा जनताले दुख पाइरहेका छन्। पूर्ण रुपले अस्पतालका काम-कारवाही बन्द नरहेको चिकित्सकहरुले बताएको भएता पनि स्वास्थ्य जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रमा केही हदसम्मको प्रभावले पनि सर्वसाधारणले दुख पाउने निश्चित देखिन्छ।
प्रकाशित : आइतबार, साउन ०६, २०७५११:३९
डा केसीका पक्षलाई बिना कुनै शर्त वार्तामा आउन वार्ता टोलीको आह्वान !
“बाख्रा र भैसी बेच्दा कर, एनसेललाई ७२ अर्ब छुट ? एनसेलको ७७ वटै जिल्लाको टावर ध्वस्त हुन्छ “
प्रधानमन्त्री ओलीले आजपनि संसदमा सम्बोधन नगर्ने !